Madaxweynaha Soomaaliya oo ku Baaqay in loo Gurmado dadka abaaruhu Saameeyeen | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku Baaqay in loo Gurmado dadka abaaruhu Saameeyeen
MUQDISHO – Madaxweyaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq ka soo saaray abaaraha ka jira qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya ka dib kulan uu la qaatay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya , Guddiga Maareynta Musiibooyinka iyo Guddiga Ka hortaga Abaaraha Qaranka.
Guddoomiyeyaasha Guddiyadda Maareeynta Musiibooyinka iyo Ka hortaga Abaaraha Qaranka ayaa marka hore madaxweynaha warbixin ka siiyey xaaladahii ugu dambeeyey ee dadka iyo duunyada degaanadda abaaraha ay ka jiraan iyo kaalmooyinka ilaa hadda la gaarsiiyey.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay sii xoojin doonto gurmadka gobollada abaaraha ay ku dhufteen islamarkaana ugu baaqay Culumaa’udiinka, Ururada Dhallinyarada, Ururada Haweenka iyo dhammaan ururada Bulshadda Rayidka ah inay billaabaan dhaqaalo ururin si gurmad loogu fidiyo gobollada abaaraha ay ka jiraan gaar ahaan gobollada Woqooyi, Bartahama iyo qeyb ka mid ah Koonfurta Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay Saxaafada Soomaaliyeed inay qabtaan barnaamijyo wacyigelin ah oo bulshada looga dalbanayo inay isu gurmadaan si uu qof walba u helo fursad uu ku caawin karo walalaha abaaraha ay saameeyeen. Madaxweynaha ayaa kaga mahad-celiyey saxaafadda Soomaaliyeed sida ay u tabiso wararka ku saabsan abaaraha dalka ka jira si umadda Soomaaliyeed ay dhexdood iskugu gurmadaan.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka dalbaday hey’adaha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah inay gargaar deg deg ah la gaaraan gobollada abaaraha ay ka jiraan.